Shiinaha Jirka-Isku-dhafka-Golaha-Isugeynta-Is-Dhexgalka-Jigs-Qalabka Qalabka Xalka Warshad iyo soosaarayaasha | Weldo
Kulan mashiinka, kulanka kulanka
Ka dib markii la dhammeeyo ka baaraandegista dhammaan qaybaha makiinadaha CNC, haddii loo baahdo, waxaan ku siin karnaa adeegyo isku-xir ah mashiinnada, isku-dheelitirka, qaybaha taageeraya, iwm. Ka caawi macaamiisha inay waqtiga ilaashadaan, badbaadiyaan foosha, iyo inay badbaadiyaan walwalka.
1: Ku shaqeynta qaybaha mashiinka cnc si waafaqsan sawirada farsamaynta.
2: Dhamee treament dusha.
3: Marka loo eego isku-dubbarididda sawirro si loo isu geeyo qaybo macaamiisha ah.
Noo soo dir email hoos u rar ilaa pdf
Iyada oo tiknoolajiyadayada hormoodka ah ay sidoo kale tahay ruuxdayada hal-abuurnimada, iskaashiga labada dhinac, faa'iidooyinka iyo horumarka, waxaan dhisi doonnaa mustaqbal barwaaqo oo ay weheliso hay'ad sharaf leh oo loogu talagalay Shiinaha OEM Shiinaha OEM Milling Turning Lathe Parts Precision Customized CNC Machining Part, Sanado badan oo khibrad shaqo ah, waxaan ogaanay muhiimadda ay leedahay bixinta alaab tayo wanaagsan leh iyo adeegyada ugu fiican ka hor iibka iyo iibka kadib.
Shirkadeena waxay tixgalineysaa "qiima macquul ah, tayo sare leh, waqti wax soo saar hufan iyo adeeg wanaagsan iibka kadib" sida mabaadi'deena. Waxaan rajeyneynaa inaan lashaqeyno macaamiil badan horumar iyo waxtar labada dhinac ah mustaqbalka. Ku soo dhowow nala soo xiriir.
Shirkadeena tan iyo markii la aasaasay, badanaa waxay tixgelisaa wax soo saarka tayada sare leh sida nolosha shirkadda, waxay si joogto ah u xoojisaa tiknoolajiyada wax soo saarka, waxay sare u qaadeysaa wax soo saarka oo si joogto ah waxay u xoojineysaa shirkadda wadarta maamulka wanaagsan. Shirkad dheeri ah, kalsoonidii ayaa halkaas ku socota. Shirkadeena badanaa adeeggaaga markasta.
Tayada Wanaagsan ee Shiinaha Qaybaha CNC, Qaybaha Mashiinka, Shirkadeena waxay taageertaa ruuxa "hal-abuurnimo, wada noolaansho, shaqo kooxeed iyo wadaagid, wadiiqooyin, horumar wax ku ool ah". Fursad na siiya waxaanan cadeynaynaa awoodeena. Caawintaada naxariista leh, waxaan aaminsanahay inaan ku abuuri karno mustaqbal ifaya wada jir
Isku soo wada duuboo sawirada ay bixiyaan macaamiisha waa inay si cad ugu muuqdaan qaab PDF ah.
Q1: Xagee ka heli karaa macluumaadka badeecada & qiimaha?
A1: Noo soo dir e-mayl baaris ah, waanu kula soo xiriiri doonaa sida aan ku helno boostadaada.
Q2: Mudo intee leeg ayaan qaadan karaa tijaabada?
J2: Waxay kuxirantahay waxyaabahaaga gaarka ah, 7 maalmood gudahood guud ahaan waa loo baahanyahay.
Q3: Maxay yihiin noocyada macluumaadka aad ugu baahan tahay xigasho?
A3: Si naxariis leh fadlan ku soo bandhig sawirka badeecada PDF, oo way fiicnaan doontaa waxaad ku dhiirrigelin kartaa STEP ama IGS
S4: waa maxay shuruudaha bixinta?
A4: Waxaan aqbalnaa 50% lacag dhigasho ahaan, markii alaabta la dhammeeyo, waxaan u qaadaneynaa sawirro jeegaaga ah kadibna waad bixin doontaa dheelitirka.Qaddar yar, waxaan aqbalnaa Paypal, guddiga Paypal ayaa lagu dari doonaa amarka. Lacag badan, T / T ayaa laga door bidaa
Q5: Sidee loo keenaa alaabta?
A5: Waxaan ku soo gaarsiineynaa badeecadaha shirkadda dirista ama hadba baahidaada
S6.Ma tahay shirkad ganacsi ama warshad?
A6: Waxaan nahay warshad toos ah oo leh in kabadan 10 injineero khibrad leh iyo in kabadan 40 shaqaale iyo waliba qiyaastii aaga aqoon isweydaarsiga 2,000 mitir laba jibbaaran.
Hore: Adeegyada Waxsoosaarka Waxsoosaarka Cnc ee Warshadda - Qaab-dhismeedka Sare ee Macaamilku Sameeyay CNC Mashiinka Qaybaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Weldo
Shirkaddu way la socon kartaa isbeddelada ku yimid suuqan warshadaha, badeecadaha si dhakhso leh ayey u cusbooneysiineysaa oo qiimahoodu waa jaban yahay, tani waa iskaashigeennii labaad, waa wax fiican.
Waxaa qoray Karen oo ka timid Dubai - 2018.02.12 14:52
Gaarsiinta waqtiga, fulinta adag ee qodobbada qandaraaska ee badeecadaha, waxay la kulantay duruufo gaar ah, laakiin sidoo kale si firfircoon ula shaqeysa, shirkad lagu kalsoon yahay!
Waxaa qoray Renata oo ka yimid Indonesia - 2017.06.16 18:23